MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA PUGSHIRE IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Pugshire iyo Sawirro
Pug / Yorkie ey isku dhafan oo isku dhafan
Penny madow Pugshire (Pug / Yorkie mix breed) oo 9 bilood jir ah— 'Penny. Pugshire aan jeclahay. Waxay leedahay astaamaha shakhsiyadeed ee ugu fiican ee Pug iyo Yorkshire Terrier. Hooyadeed waa Pug madow qurux badan oo la yiraahdo Dolly & aabaheed oo aad u qurux badan Yorkshire Terrier loona yaqaan Charlie. Penny waa mid cayaareed oo jecel, Xan xun laakiin fiican, waxay garaneysaa sida loo leexiyo madaxeeda oo ay isiiso indhaha eyda eyda ugu quruxda badan si ay u hesho wax kasta oo ay rabto! Waxay sameysaa qeylada ugu yaabka badan markay kuu sheegeyso waxay rabto, waxay u egtahay inay kula hadlayso, runti waan hubaa inay iyadu tahay. Iyadu waa wax walba oo aan ku riyooday eey, iyadu waa, My Penny. '
Pugshire ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Baabuur iyo Yorkshire Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Pugshire
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Terrier Pugshire
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Pugshire Terrier
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Pugshire
Waa kan Pug / Yorkshire Terrier (Pugshire) oo jira 4 sano. Bruno dhowaan ayuu dhaafey laakiin wuxuu ahaa eey cajiib ah. Wuxuu ahaa dayactir hooseeya oo wuxuu daadiyay qadar yar. Wuu heli lahaa 3-6 socod wiiggii . Wuxuu jeclaa inuu qodo qashinka sidaa darteed waa inaan sii wadnaa! Wuxuu ahaa xannaaneeye weyn, eeyaha kale sifiican ula ciyaara, guriga ayuu ku dhegganaa markii bannaanka loo soo daayay, wuxuu jeclaa carruurta, eeyaha kale iyo dadka oo dhan. Waxaan dareemayaa in Bruno uu ahaa eey heer sare ah oo aad isu dheelitiran. Wuxuu ka tagi lahaa hurdada / nasashada ilaa uu kor u kacayo oo uu ku ciyaarayo / ku ordayo. Wuxuu jeclaa barafka, iyo biyaha maalmaha kulul. Runtii wuxuu ahaa eey layaableh oo leh shakhsiyad hal-nooc ah oo si weyn ayaa loo tabi doonaa.
'Kani waa Lacag, Eygeyga Pugshire ee jira 3 bilood. Runtii isagu waa eey caqli badan, ciyaar badan. Tabaha aan u maleynayo eeyahaani waa mid joogto ah, joogteyn iyo waqti lagu qaatay. Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro iyo tamashle u bax . Isaguba aad ayuu daacad ugu yahay safarka duurka asbuuc asagoo 4 bilood jir ah waligiis ma uusan qaadin wax ka badan 20 daqiiqo iyo wax la mid ah, mar walbana wuu ku soo noqdaa si uu u arko meesha aan joogno. Waxaan daawadaa Eyga Whisperer iyo wax kasta oo aan daawaday shaqooyin, tababarka digaagga, tababarka dheriga , caadooyinka cunista , iyo xukun . Isagu wuxuu ugu jawaabayaa sida ugu fiican ee daaweynta xoojinta looma baahna had iyo jeer — wuxuu kaliya doonayaa inuu ku farxo isaga. Wax walba oo aan iskuday Cesar waxay ushaqeeyaan ilaa hal usbuuc oo iswaafajin iyo tababar ah. Wuxuu ahaa qof aad u qurux badan 90% oo hoyga ah oo 3 bilood jir ah wuxuuna sameyn karaa tabaha badan, wuxuu si fiican ugu socdaa xadhig iyo dhagaysta amarrada . Waxaan ka helay eeygan ciyaareysa, ee caqliga badan inay aad muhiim u tahay in awooddaada isla markiiba la caddeeyo, 'maxaa yeelay wuxuu jecel yahay inuu wax la tartamo, wuxuu u baahan yahay inuu ogaado cidda madax u ah. Aad ayey u qurux badan yihiin sida ilmaha, laakiin Xusuusnow waxay u fekeraan sida eeyaha . '
'Kani waa Lacag, Eygeyga Pugshire ee jira 11 toddobaad.'
Petunia the Pugshire oo 7 bilood jir ah
Hitch the Pug / Yorkshire terrier mix my breed (Pugshire) - milkiilihiisa ayaa leh, Waxaan ugu yeernaa Yug, laakiin kulligiin waxaad ugu yeeraan Pugshires. Isagu waa eeygayaga oo isagu waa 10 bilood oo kaliya malaa'ig nadiif ah! Laakiin isagu wuxuu leeyahay shakhsiyadda Yorkie oo doonaysa inay wax walba baarto! Had iyo jeer wax noqo.
Ku dheji nooca Pug / Yorkshire terrier mix (Pugshire) markay jiraan 10 bilood
Burcadda Pugshire puppy at 5 ½ bilood jir— 'Hooyadiis waa Yorkie ka weyn aabihiisna wuxuu ahaa Pug. Wuxuu ku koray baaxada Pug oo leh muuqaalka Yorkie (iyo dabeecadda Yorkie!). Ciyaalka kale ee qashinka ka soo baxa waxay u muuqdaan kuwo gebi ahaanba ka duwan. Waxay u egyihiin sida Pug laakiin cabirka Yorkie. '
Poki the Pugshire oo 2 jir ah— 'Hooyadeed waxay ahayd Yorkshire Terrier aabbeheedna wuxuu ahaa Pug midabkeedu wanaagsan yahay. Iyadu waa eeyga ugu caqliga badan, ugu macaan uguna firfircoon ee aan ogahay waana ku jecel nahay iyada dhimashada. '
Jemma iyo Juicy the Pugshires oo jira 1 sano— 'Tani waa Jemma iyo Juicy. Waa walaalo pugshire. Maanta waa dhalashadooda 1 sano. Way firfircoon yihiin oo way isku dhegan yihiin, lol! Meel kasta oo aan aado way i raacaan. Had iyo jeerna way is dhinac socdaan. Way daalaan laakiin waa layaab! '
Jemma iyo Juicy the Pugshires oo ah eyyo
Eeg tusaalooyin badan oo Pugshire ah
feeryahan isku qasan retriever dahabka
maxey eyda sanka madow u leeyihiin
7 toddobaad puppy puppy
jack russell terrier qasan iyo pitbull
miniature shar pei buuxa oo koray
madow iyo tan isku darka chihuahua